काठमाडौंको धापासी बाट भर्खरै घट्याे यस्ताे दु:खद घटना ! – Ramailo Sandesh
काठमाडौंको धापासी बाट भर्खरै घट्याे यस्ताे दु:खद घटना !
काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–६ धापासी डाँफे कोलनी नजिकै मंगलबार दिउँसो कारको ठ“ क्करबाट स्कुटरमा सवार ५ वर्षीय बालकको मृ- त्यु भएको छ ।
प्रदेश–१–०२१ च २९५६ नम्बरको कारले प्रदेश २–०३५ प ०५२० नम्बरको स्कुटरलाई ठ“ क्कर दिंदा स्कुटरको पछाडी सवार स्थानीय ५ वर्षीय बालक प्रियान्स उप्रेतीको मृ` त्यु भएको हो ।
कारको ठ“|क्करबाट गम्भीर घा`इते भएका बालकको उपचारका क्रममा ग्राण्डी अस्पतालमा मृ“ त्यु भएको हो । ठ“ क्कर दिने कार सहित चालकलाई प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
भुडी दिनानु दिन बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? उसोभए सुत्नुअघि गर्नुहोस् यी ५ काम
काठमाडौँ । दुब्लो मानिसलाइ सँधै मोटाउने रहर हुन्छ तर,मोटो मानिसलाई भने बरु दुब्लाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको हुन्छ। वास्तवमा यो नै आम मानिसको नियती बनिरहेको छ। मोटोपन एउटा यस्तो बिरामी हो जसले साथमा अन्य कयौं बिरामीहरु बोकेर आउँछ।
यसर्थ मोटोपनलाई रोगको भारी पनि भन्ने गरिएको छ। यदि यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने मान्छे बिभीन्न रोगको शिकार हुँदै क्रमश मृत्युको मुखमा धकेलीरहेको हुन्छ।कामको व्यस्तताको कारण मानिसहरु नियमितरुपमा शारीरिक अभ्यास पनि गर्न भ्याउँदैनन।
यदि तपाई पनि मोटोपनको शिकार हुनुहुन्छ भने यि कुराहरुलाई ध्यानपूर्वक विचार गर्नुहोस् । यदि तपाई राती सुत्नुभन्दा अगाडि यि पाँच उपायहरु अपनाउनुहुन्छ भने तपाईले मोटोपनलाई नियन्त्रणसुत्नुभन्दा अघि खुर्सानीको सेवन गर्नुहोस् खुर्सानीले बोसो घटाउने काममा धेरै नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यसकारण सुत्नुभन्दा अगाडिको खानासँगै खुर्सानी खानुपर्छ ।
सुत्नुभन्दा अगाडि चिया पिउनुहोस: राती सुत्नुभन्दा अगाडि ग्रीन चिया पिउनाले पनि शरीरको मेटाबोलिज्म बढ्छ । यसले रातभरी तपाईंको तौल घटाउने काम गर्छ ।
सुत्नुभन्दा अगाडि तनावमुक्त हुनुहोस् :आनन्द महसुस गर्नसक्ने वातावरण बनाउनुहोस् । राम्रा राम्रा र सकरात्मक सन्देश दिने गीत सुन्नुहोस् । नुहाउनुहोस् ।यसले तपाईलाई राम्रो निद्रा पार्न सहयोग गर्छ ।
रातीको खाना सात बजेसम्म खाइसक्नुहोस् : ढिलो खाना खाने र भोजनलगत्तै सुतिहाल्ने गर्दा तपाईंको मेटाबोलिज्ममा प्रभाव पर्दछ । जसले तौल बढ्न सक्छ ।
खाना अगाडि सूप खानुहोस : बिहानरबेलुकीको मुख्य खानाको सुरूआत सूपबाट गर्नु उत्तम हुन्छ।